Awunqabile udibana nentsapho engaziyo into, ingxabano kwintsapho. Xa ukuxabana nomntu othandekayo kwenzeka, akubi kakhulu. Iingcali zengqondo zakwazi ukufumana izizathu eziphambili zokuxabana kwintsapho. Ukwazi iimbangela zokuxabana, unokuthintela le ngxabano okanye ukunciphisa ubuncinane.
Ngokuqhelekileyo imbangela yokuxabana ibonakala xa amaqabane ahloniphi omnye nomnye. Awuqapheli ukuba uyaphukisa njani, uyaphukisa kwaye uyanciphise ukuzithemba komlingani wakho. Kwakhona, ukuba uqala ukungazithembi, uqala ukulawula izenzo zomntu osondeleyo kwaye uhlale enomona ngaphandle kwesizathu.
Isizathu esivame ukuphikisana ngukungabikho komtshato kwintsebenziswano. Xa uqala ukuphandana, kwakuhlala kuthanda ubudlelwane bakho, kodwa emva kwexesha kwaqala ukutshabalalisa. Ulibala ukuba udlala ngantoni, uyeka ukwakha amehlo kwindoda yakho, akakunikeli loo nto ingaphambili. Uyeke ukubukeka kwimeko yakho kwaye ungeke uhlawule ingqalelo ukuba uyahamba ngeenxa zonke endlwini.
Wonke umntu unengcamango malunga nobomi bentsapho. Kwaye xa ufika ebomini bentsapho, ufumana ukungafani kokubakho okulindelekileyo malunga nobomi bentsapho. Esi sizathu sokuxabana kwakho. Kwaye ukungabi nabubele, ukuqonda, ukunakekelwa, konke oku kukhokelela ekuxabaneni kwintsapho yakho.
Kwakhona, ingxabano kwintsapho inokuvela ngenxa yeemfuno ezingenelungelo lokuba amaqabane enza omnye komnye.
Xa amaqabane achitha ixesha labo elikhululekileyo elityebileyo kwaye elincinci, ngaphandle kwemizwa ecacileyo. Yaye ukuba bachitha ikhefu zabo, baye bangabangela ukuxabana kwintsapho.
Ukuba unengxabano kwintsapho, zama ukuyibuyisela kuyo ingxabano. Emva kwakho konke, ingxabano, olu luhlobo oluhlonelanayo komnye nomnye. Kodwa nangona kunjalo, musa ukuya kucaciso lomntu. Injongo ephambili yombambano iya kuhlazisa umlingane wakho, aphule intando yakhe. Kwaye kule ngxabano abayi kuba nabanqobi, kodwa kuphela abalingani bobabini abaza kuba balahlekelwa. Ngoko ke, kufuneka ufunde ukuphikisana, kwaye ungaxabani uze uqaphele indlela onokuyenza ngayo ubomi bakho bentsapho.
Zama ukuphepha ukuthotywa. Iingcali zengqondo zakwazi ukufumanisa ukuba abo baqabane abanobini banomdla ngakumbi kunabo abathuliyo kwaye abaxeleli iingcamango zabo.
Yenza intsapho yakho ibe neembambano ezimbalwa ngokunokwenzeka.
Kutheni umntu efuna ukwazi ikhefu lakhe elidlulileyo
Ukutya ukutya okuthandayo kuya kukhulula ngokukhawuleza
Indlela yokufundisa umntwana ukuba ahlambulule izinto zakhe?
Ukuhlanjululwa kwe-Lunar: ngubani ofanelekileyo kunye nendlela yokwenza ngayo wena
Isondlo esifanelekileyo ngexesha lokukhulelwa